शिल्पाले डिभोर्शको केस हालिन: करिश्माले भनिन, तिमि न्यायकालागि कानुनि प्रक्रियामा जाउ – Rapti Khabar
फिल्म निर्देशक छबि ओझा र शिल्पा पोख्रेलको पारिवारिक सम्बन्धमा अझै सुधार आएको छैन ।छबि ओझाले हामी बिचको समस्या हल भयो, हामी मिलेका छौ भन्दै गर्दा यता शिल्पाले भने छबि संग अब बस्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएकि छिन ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै शिल्पाले ३ बर्ष देखि श्रीमानबाट अन्याय भोग्दै आएको र अन्तिम भएपछी अब सम्बन्ध तोड्ने स्थितिमा पुगेको बताएकी छिन । श्रीमान छविले आफुलाई संका गर्दै आएको बताएकी छन् । संकाको कारण श्रीमानको घरेलु हिम्सामा परेको बताएकी छन् ।
यसै प्रसंगमा नायिका करिश्मा मानन्धरले शिल्पा ठुलो समस्यामा परेको हुन सक्ने बताउदै न्यायका लागि कानुनि प्रक्रियामा जान सुझाब दिएकि छिन । आफु बलियो हुन् आग्रह गर्दै शिल्पाको साथमा रहेको करिश्माले बताएकी छन् ।
छबिले विभिन्न मिडियाहरुमा आफ्नो गल्ति नभएको स्पस्टिकरण दिरहेको बिषय झुटो अभिव्यक्ति दिरहेको बताउदै बिगतका श्रीमतीहरुलाई पनि अन्याय गर्दै आएको शिल्पाले बताएकि छन् । छबि ओझाको पुर्ब पत्नी गितान्जली श्रीमान ओझाकै कारण डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गरेको समेत दाबि गरिन ।
त्यस्तै रेखा थापालाइ पनि अन्याय गर्दा छुट्टै बसेको दाबि पनि गरिन । र अब आफुले पनि छबिसंगको बैबाहिक सम्बन्धलाई टुंग्याउने बताएकी छिन ।
छविका दुर्ब्यबहारलाई ३ बर्ष सम्म सहदै आएकोले आफुलाई धेरै गाह्रो भएको भन्दै अन्तर्वार्तामै रोईन । बिगतमा समस्या आउदा मिल्न प्रोसाहन दिएकै कारण तिन बर्षहरु बिते तर अब मिल्न नसक्ने बताइन ।
शिल्पाले भनिन, मिल्नुस भन्नेलाई म त्यहि भन्न चाहान्छु. अब म सक्दिन बस्न । मैले हिजो गएर डिभोर्शको फाइल गरिसकेको छु । छबि जीले अहिले मिडियामा गएर धेरै आरोप लगाउनु भएको छ ।
सामाजिक संजालमा घरायसी कुरा नमिलाएर किन पुलिसमा गएको ? भन्नेहरुलाई शिल्पाले भाबुक जबाफ दिएकि छन् । उनले भनिन, मैले छबि जिको लागि कति गरेको छु त्यो मलाइ थाहा छ, मलाई थोरै जनाले सपोर्ट गर्नु भएको छ । मलाई नराम्रो कमेन्टहरु आएको छ, मलाई पिर परेको छ अनि म बोलेनी त । ३ बर्ष म चुप लागेको थिए, अब म मर्नु ? मलाई धेरै गाह्रो भयो, त्यसकारण म पुलिसकोमा गए ।
मेरो ममी ड्याडीको धेरै इज्जत छ बिराट नगरमा । त्यहि इज्जतको बारेमा सोच्दा सोच्दै ३ बर्ष सम्म चुप लागेर बसे, त्यसरी बस्नु नै गल्ति भयो । जसको कारण छबि जीको हिम्मत बढेको बढेई भयो । उनले रुँदै भनिन ।
मान्छे लगाएर मार्छु भनेर जिबनको सुरक्षा नभए पछि बाध्य भएर पुलिसकोमा गएको बताएकी छिन । जन्म दिने आमाबाब भन्दा माथि राखेर माया गरेको मान्छेले नै आफुलाई मार्न थालेपछि घरबाट निस्केकी बताइन । निस्किसके पछिपनि छबिको फोन आउछ कि भनेर पर्खेर बसेको तर फोन नआएको सुनाइन । भोलि पल्ट छबिको फेसबुक खोलेर हेर्न खोज्दा ब्लग गरिसकेको बताइन ।
छवि र शिल्पाको खटपटपछि छवि
काठमाडौँ । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्नो श्रीमान छविराज ओझा विरुद्ध एकाएक प्रहरीमा उजुरी गरेपछि माहोल गर्माएको थियो । तर आज बिहिबार निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरलेबिच महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा सहमति भएको छ ।
शिल्पाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै काठमाण्डौ प्रहरी परिसरमा पति छविराज ओझा विरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् । छवि र शिल्पाले विवाह भएको लुकाउँदै आएका थिए । एकाएक डिर्भाेसको खबर आउँदा माहोल निकै तातेको थियो ।
छविराज ओझाकी शिल्पा चौथो श्रीमती हुन् । उनले ओझाले निर्माण गरेको फिल्म ‘लज्जा’बाट चलचित्रमा डेब्यु गरेकी हुन् । उनीहरु बीच आगामी दिनमा झगडा नगर्ने भन्दै लिखित सम्भौता भएको हो ।
तर, ओझाले डिर्भोस नदिने उल्लेख गरेका छन् । खटपट बाहिर आएपछि पुर्वपत्नी तथा नायिका रेखा थापको फोन आएको छ भन्ने प्रश्नमा ओझाले भने- हो उहाँले यस्तो हुँदैछ भनेर फोन गर्नुभएको थियो ।’
घरझगडा भएपछि शिल्पा अहिले दाई बनाएकी विकाश रौनियारको घरमा बस्दै आएकी छिन् । टेकु निस्किएपछि पनि शिल्पा दाइ रौनियारकै गाडीमा बसेर गइन् । गाडीमा उनी रोइ रहेकी देखिन्थिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुस भनेपछि शिल्पाले भनिन – ”मलाई जे पर्यो मैले भोगे, कसैलाई दुख्दैन मलाई मात्र दुख्छ, यदि कसैलाई त्यस्तै पिर परेको छ त्यस्तै पिडा परेको छ भने कृपया आउन सक्नु हुन्छ । म आए भने तपाईहरु पनि नडराई आउनु ।”
शिल्पाका अनुसार छबी राज ओझाले शिल्पासंग माफी मागेका छन् । अब देखि त्यसो नगर्ने सहमति भएको बताएका छन ।
चर्चित नायिका रेखा थापाले फिल्म निर्देशक छबि ओझा संग सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा रेखा माथि यो समाज निकै खनिएको थियो ! रेखालाई भन्थे ‘छबि ओझाले हिरोइन बनायो, त्यसैलाई रेखाले धोका दीइन’ ।
बस्ताबमा रेखा थापा यो समाजले आलोचनाको सिकार बनिन ! जतिबेला छबि ओझा इमान्दार र निर्दोष बनाइएका थिए ।
जब शिल्पा पोख्रेल र छबि ओझाको सम्बन्धमा फेरी दरार आयो त्यसपछि यतिबेला छबि ओझा आलोचनाको निशानामा पर्न थालेका छन् ! शिल्पाको बयानले पनि छबिको छविमा धुमिल देखिएको छ ।
सामाजिक संजालमा धनि श्रीमानका श्रीमतीहरु दासी बन्छन भन्ने टिप्पणी बढ्न थालेको छ । धनसम्पति, मान प्रतिष्ठा र सम्मानका परिपुरक छबि ओझालाई तिन चार वटी श्रीमती संग सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा उनको ब्यबहार प्रति औला उठ्न थालेको छ ।
शिल्पा पोख्रेलले घरेलु हिँसाको गरिन सनसनीपूर्ण खुलासा
यस्ता छन् छवि ओझाका चार चमत्कार,
सबैलाई दङ्ग पार्ने डान्सर तेरियाको ‘पाउट’ [फोटो फिचर]
Posted on July 15, 2019 July 15, 2019 Author Rapti Khabar
तेरिया १८ वर्षकी भइन् । सानो उमेरमा पनि उनले नाचेर धेरै नाम र दाम कमाइसकेकी छन् । उनले भारतीय सिनियर डान्स स्टारबीचको ठूलो नृत्य प्रतियोगिता जितिन् । त्यो भारतीय टीभी कलर्सको ‘झलक दिखला जा’ को रियालीटी सोको उपाधि थियो । यसमा अन्य डान्स प्रतियोगिताका विजेताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जितसँगै तेरियाले ३० लाख भारतीय […]